दृष्टिकोण Archives - Page5of6-
२०७७, २२ बैशाख सोमबार ११:५३
विपतको समयमा सदस्यसँग हातेमालो गर्नु नै सहकार्य हो
दृष्टिकोण २०७७, २२ बैशाख सोमबार ११:५३ 0
तीर्थ तिम्सिना सामान्य अर्थमा हामी सहकारीलाई सहकार्यको रुपमा लिने गरिन्छ । एक आपसमा मिलेर गरिने पारस्पारिक सहयोग तथा सहकार्यबाट नै सहकारीको सुरुवात भएको मानिन्छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा आफ्ना सदस्य र सामुदायिक हितका लागि आपसमा मिलेर काम गर्नु नै सहकार्य/ सहकारी हो । सहकारीता भन्नाले समान इच्छा, आकांक्षा र समान आस्था भएका व्यक्तिहरुको प्रजातन्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमान्दारीता, समानता एंव समन्वयमा...
हामीले लकडाउनको कति पालना गरिरहेका छौँ ?
दृष्टिकोण २०७७, २२ बैशाख सोमबार १०:२३ 0
सुदर्शन खतिवडा अहिले संसारमा मानव अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। कोरोना भाइरसले हालसम्म विश्वमा ३४ लाख ८३ हजार ९ सय ३५ भन्दा बढी सन्क्रमित र २ लाख ४४हजार ७ सय ७३ भन्दा बढीले ज्यान गुमाइ सकेको अवस्था छ । संसारकै सर्बसम्पन्न भनिएको मुलुक अमेरिकाको मात्र कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको बर्तमान अवस्था सारै भयानक रहेकोे हामी देख्न सुन्न सक्छौँ। यो अवस्थामा...
दृष्टिकोण २०७७, १९ बैशाख शुक्रबार २०:२८ 0
आज विश्वमा १ अर्ब ६० लाख जनसंख्याले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा विश्वको अर्थतन्त्र त तहसनहस नै भइरहेको छ । कोही रोगको कारण मर्न बाध्य छन् भने भोकले पनि मानिसलाई उत्तिकै सताएको छ । सुस्मिता खतिवडा " जे हुन्छ राम्रैका लागी हुन्छ " भनी मैले एउटा कथामा सुनेकी थिए । वास्तबमै हरेक चिजको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष हुने गरेको पाइन्छ । विश्वभर...
श्रमिकका लागि सरकारले यी काम गरोस्
दृष्टिकोण २०७७, १९ बैशाख शुक्रबार १३:५४ 0
रविन्द्र घिमिरे श्रमिकको पसीनाले नै ठूला महल र सडक बने, खाने अनाज उत्पादन भयो, औद्योगिक उत्पादन संभव भयो तर तीनै श्रमीकको जीवन उपेक्षित भइरहेको छ । विश्वमा श्रोत र साधनको असमान वितरण हुने संरचना भइन्जेल श्रमिकले श्रमको मूल्य पाउनेछैन । हिजो श्रमीकका पक्षमा निकै चर्का कुरा गर्नेहरु श्रमीकको भोटले सरकारमा पुग्न सफल भएका छन् । अब कुरा हैन काम गरेर...
भारतमा लोभलाग्दो नेपाली बाल साहित्य
दृष्टिकोण २०७७, ८ बैशाख सोमबार १३:१८ 0
धेरै पहिले देखि नै भारतमा समेत नेपाली जातीहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । चाहे काम र अवसरको खोजीमा होस् या सुरक्षित गाँसबासका लागि होस् या इतिहासका घटनाहरुले उतै बस्नबाध्य हुन परेका कारणले । भारतीय नागरिकका रुपमा लाखौँलाख नेपालीहरु भारतमा रहेका भेटिन्छन् । उनीहरुले नेपाली विविध संस्कार, संस्कृति, रितिरिवाजदेखि भाषा साहित्य पनि सँगसँगै अँगाल्दै आएका पाइन्छन् । स्वभाविकै हो मानिसले...
लक डाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने कि ?
दृष्टिकोण २०७७, ८ बैशाख सोमबार १२:३७ 0
डा. रवीन्द्र पाण्डे सरकारले कार्यान्वयन गरेको लकडाउनको कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण न्यून संख्यामा सिमित रहेको छ । लकडाउनलाई अझै परिणाममुखी बनाउनको लागि यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु आबश्यक छ । बिहान तथा बेलुका मान्छेको चहलपहल हुने, काम नपरे पनि घर बाहिर निस्किने तथा भित्री बस्तीमा भीडभाड हुने समय हो । तसर्थ दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म स्थानीय पसल खोल्ने एबम् बिहान र...
दृष्टिकोण २०७७, ७ बैशाख आईतवार १४:२५ 1
भुवन तामाङ ए होई ए होई अमेरीकामा के उट्याङ्ग हुन लाग्यो १ अमेरीकामा जनताहरु लकडाउन खोल्नुपर्ने मागगर्न थालेका छन् । उनीहरु बन्दुकसहित घरबाहिर निस्केर त्यस्तो माग गरेका देखिएका छन् । अमेरीकीहरु संसारकै सम्पन्न र शिक्षित भएको विश्व समुदायको मान्यता छ । तर बन्दुकले कोरोना भाईरस नष्ट हुँदैनन् भन्ने अमेरीकीहरुलाई किन थाहा नभएको हो रु भन्ने पनि विश्व मानव समुदायलाई सोच्न...
लकडाउनमा स्थानीय तहः पछिको देखेर आजै सुरु गर्नुपर्छ
दृष्टिकोण २०७७, ५ बैशाख शुक्रबार १५:०४ 0
लवशेर विष्टवर्ष २०७७ को आरम्भ लकडाउनमै बित्यो । तीनसातादेखिको लगातार लकडाउन हट्ने सम्भावना पनि थिएन । सरकारले २ वैशाखमा लकडाउन थप १२ दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । आहतको त्रिपालमुनि रहेका नागरिकमा यसले अरू निराशाको पिङ मच्चाएको छ । तर स्थानीय सरकारले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन थप प्रयास गर्दै नागरिकमा देखिएको निराशाको धर्सो मेट्नु हामी जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तरकारी नबिकेको...
दृष्टिकोण २०७७, ४ बैशाख बिहीबार ११:११ 0
डा. सुबोध ढकाल विपद् व्यवस्थापनको सवालमा जब समस्या पर्छ अनिमात्र समाधानतिर लाग्ने परिपाटी परम्परा जस्तै बनेको छ । तर कोरोना भाइरस फैलिसकेपछिको समयमा हेर्दा विश्वका सम्पन्न देशहरू पनि विपद् व्यवस्थापनमा चुक्ने गरेको देखिएको छ । जस्तो कि पछिल्लो समयमा अमेरिका कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने राष्ट्रको रूपमा आइसकेको छ । त्यस्तै स्पेन, इटाली जस्ता देशमा कोरोनाके कारण भइरहेको मानवीय...
आश्रितलाई त्याग्नु अधर्म हो ।
दृष्टिकोण २०७७, २ बैशाख मंगलवार १४:०९ 0
मधुसुधन रिजाल भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो लीला समाप्त गर्नुभएको तथा परस्परको झगडाले यादवहरुको नाश भइसकोको खबर सुनेपछि राज युधिष्ठिर, अर्नुनका नाति परीक्षितलाई राजसिंहासनमा बसाई राजभवनबाट निस्की सन्यास लिई उत्तर दिशातर्फ लागे । उनले मायामोह सब त्यागिसकेका थिए । उनका चारै भाइ र द्रोपदी पनि उनका पछि लागे । न खानु, न पिउनु, न आराम गर्नु, उनी अगाडी बढ्दै गए । बाटामा द्रौपदी,...
Hey Buddy!, I found this information for you: "आश्रितलाई त्याग्नु अधर्म हो ।". Here is the website link: https://epurbeli.com/archives/382. Thank you